Ny Bokin’ i Môrmôna dia bokin’ ny soratra masina azo oharina amin’ ny Baiboly. Izany no rakitsoratry ny fifandraisan’ Andriamanitra tamin’ ny mponina fahiny tany Amerika ary mitahiry ny fahafenoan’ ny filazantsara maharitra mandrakizay.
Nosoratan’ ny mpaminany maro fahiny ny boky, tamin’ ny alalan’ ny fanahin’ ny faminaniana sy ny fanambarana. Notaterina sy nofintinin’ ilay mpaminany sady mpahay tantara nantsoina hoe Môrmôna ny tenin’ izy ireny voasoratra teo amin’ ireo takela-bolamena. Manoritsoritra ny tantaran’ ny riba lehibe anankiroa ny rakitsoratra. Ny anankiray dia nipoitra avy tao Jerosalema, 600 talohan’ i J.K., ary nizara ho firenena roa tatỳ aoriana ka fantatra tamin’ ny hoe: ny Nefita sy ny Lamanita. Ny iray hafa dia nitranga elabe talohan’ izany, raha nanorokoro ny fiteny teo amin’ ny Tilikambon’ i Babela ny Tompo. Fantatra amin’ ny hoe: ny Jarèdita io vondrona io. An’ arivo taona maromaro tatỳ aoriana dia fongana avokoa izy rehetra afa-tsy ny Lamanita ary ireo no razambe niavian’ ny Indianina any Amerika.
Ny zava-nitranga lehibe indrindra voarakitra ao amin’ ny Bokin’ i Môrmôna dia ny asa fanompoan’ i Jesoa Kristy Tompo, Izy tenany, teo anivon’ ny Nefita fotoana fohy taorian’ ny fitsanganany tamin’ ny maty. Manazava ny fotopampianaran’ ny filazantsara izany, manoritsoritra ny drafitry ny famonjena ary milaza amin’ ny olona ny tsy maintsy hataony hahazoana fiadanana eo amin’ ity fiainana ity sy famonjena mandrakizay amin’ ny fiainan-ko avy.
Rehefa tontosan’ i Môrmôna ny asa sorany, ny fitantarana dia natolony an’ i Môrônia zanany lahy izay nanampy ny teniny vitsivitsy sy nanafina ireo takelaka tao amin’ ny havoanan’ i Komôrà. Io Môrônia io ihany, izay lasa olona heni-boninahitra sy nitsangana tamin’ ny maty, dia niseho tamin’ ny mpaminany Joseph Smith ny 21 Septambra 1823 ka nampahafantatra azy ny momba ny rakitsoratra tranainy sy ny tokony handikana izany ho amin’ ny teny Anglisy.
Tamin’ ny fotoana voatondro dia natolotra an’ i Joseph Smith ny takelaka ka izy no nandika izany tamin’ ny alalan’ ny fanomezam-pahasoavan’ Andriamanitra sy ny heriny. Avoaka ho amin’ ny fiteny marobe ny rakitsoratra ankehitriny ho toy ny vavolombelona vaovao sy fanampiny fa i Jesoa Kristy no Zanak’ Ilay Andriamanitra velona, ka izay rehetra manatona Azy sy mankatò ny lalàna ary ny ôrdônansin’ ny filazantsarany no azo vonjena.
Hoy ny mpaminany Joseph Smith momba io rakitsoratra io: “nolazaiko ny rahalahy fa ny Bokin’ i Môrmôna no boky marina indrindra amin’ ny boky rehetra eto an-tany sy vato ifaharan’ ny fivavahantsika, ary hanatona bebe kokoa an’ Andriamanitra ny olona amin’ ny fanarahana ny fepetra ao anatiny toy izay ny ao anatin’ ny boky hafa.”
Ankoatra an’ i Joseph Smith dia nataon’ ny Tompo izay hahitan’ ny olona iraika ambin’ ny folo hafa ny takela-bolamena, ka ho vavolombelona manokana ny amin’ ny fahamarinana sy ny maha avy amin’ Andriamanitra ny Bokin’ i Môrmôna ireo. Voarakitra an-tsoratra etoana ny tenivavolombelon’ ireo ho toy “Ny Tenivavolombelon’’ ireo vavolombelona telo” sy “Ny Tenivavolombelon’ ireo vavolombelona valo.”
Manainga ny olona rehetra izahay, na aiza na aiza misy azy, hamaky ny Bokin’ i Môrmôna, hisaintsaina ao am-pony ny hafatra raketiny, ary avy eo dia hanontany an’ Andriamanitra, Ilay Ray Mandrakizay, amin’ ny anaran’ i Kristy, raha marina ny boky. Ireo izay manaraka izany torolalana izany, ka mangataka amin’ ny finoana dia hahazo ny fanambaran’ ny fahamarinany sy ny maha avy amin’ Andriamanitra azy, amin’ ny alalan’ ny herin’ ny Fanahy Masina (jereo Môrônia 10:3–5).
Ireo izay mandray izany tenivavolombelon’ Andriamanitra izany avy amin’ ny Fanahy Masina dia hanjary hahafantatra koa amin’ ny alalan’ io hery io ihany fa i Jesoa Kristy no Mpamonjy izao tontolo izao, fa i Joseph Smith no mpanambara sy mpaminaniny amin’ izao andro farany izao, ary Ny Fiangonan’ i Jesoa Kristy ho an’ ny olomasin’ ny andro farany no fanjakan’ ny Tompo voaorina indray eto an-tany ho fanomanana ny fiavian’ ny Mesia fanindroany.
Ny Tenivavolombelon’ ireo Vavolombelona Telo
Aoka ho fantatry ny firenena, ny foko sy ny samy hafa fiteny ary ny mponina rehetra izay hahatongavan’ ity boky ity: fa izahay, noho ny fahasoavan’ Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompontsika, dia nahita ireo takelaka izay mitahiry ity rakitsoratra ity, izay rakitsoratry ny olon’ i Nefia ary koa ny Lamanita rahalahiny, ary koa ny olon’ i Jarèda izay avy tany amin’ ny tilikambo araka ny efa voalaza. Ary fantatray koa fa efa nadika araka ny fanomezam-pahasoavan’ Andriamanitra sy ny heriny ireo, satria ny feony no efa nilaza izany taminay; noho izany dia fantatray amim-pahatokiana fa marina ny asa soratra. Ary ambaranay koa fa efa nahita ny soratra voasokitra teo amin’ ireo takelaka; ary efa naseho anay ireo tamin’ ny alalan’ ny herin’ Andriamanitra, fa tsy araka ny herin’ olombelona. Ary amin-kitsimpo tanteraka no ilazanay fa ny anjelin’ Andriamanitra iray dia nidina avy tany an-danitra ka izy no nitondra sy namelatra ireo takelaka teo imasonay, ka dia nobanjininay sy nojerenay ireo mbamin’ ny soratra voasokitra taminy; ary dia fantatray fa noho ny fahasoavan’ Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompontsika, dia nahita izahay ka vavolombelona manambara fa marina ireo zavatra ireo. Ary dia fahagagana teo imasonay izany. Na dia teo aza izany, dia nandidy anay ny feon’ ny Tompo ho vavolombelona manambara izany; koa ho fankatoavana ny didin’ Andriamanitra, dia vavolombelona manambara ireo zavatra ireo izahay. Ary fantatray fa raha mahatoky ao amin’ i Kristy izahay, dia hoesorinay amin’ ny fitafianay ny ran’ ny olombelona rehetra, ka ho hita tsy misy pentina izahay eo anatrehan’ ny toeram-pitsaran’ i Kristy ary hiara-honina Aminy mandrakizay any an-danitra. Ary ny voninahitra anie ho an’ ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, izay Andriamanitra iray. Amena.
Ny Tenivavolombelon’ ireo Vavolombelona Valo
Aoka ho fantatry ny firenena, ny foko sy ny samy hafa fiteny ary ny mponina rehetra izay hahatongavan’ ity boky ity fa efa nasehon’ i Joseph Smith, zanany, mpandika tenin’ ity boky ity anay, ny takelaka izay efa voalaza, izay miendrika volamena; ary izay takelaka rehetra efa nadikan’ io Smith voalaza io dia nokasihinay tamin’ ny tananay; ary nahita koa ireo soratra voasokitra taminy izahay, ka ireo rehetra ireo dia manana ny endriky ny asa soratra tranainy sy ny fahaizana asa kanto. Ary izahay dia vavolombelona manambara izany amin-kitsimpo fa efa nasehon’ io Smith voalaza io anay izany, satria efa hitanay sy naingain’ ny tananay, ka fantatray marina fa io Smith voalaza etsy aloha io no manana ireo takelaka izay efa noresahanay. Ary omenay izao tontolo izao ny anaranay ho vavolombelona amin’ izao tontolo izao ny zavatra izay efa hitanay. Ary tsy mandainga izahay, fa Andriamanitra no vavolombelona manambara izany.
Peter Whitmer, zanany
Joseph Smith, rainy
Ny Fanambaran’ ny Mpaminany Joseph Smith
Izao no tenin’ ny mpaminany Joseph Smith momba ny niavian’ ny Bokin’ i Môrmôna:
“Ny harivan’ ny … iraika amby roapolo Septambra  … dia nanomboka nivavaka sy nitalaho tamin’ Andriamanitra Tsitoha aho. …
“Raha mbola teo am-piantsoana an’ Andriamanitra toy izany aho dia nahita hazavana nipoitra tao an’ efitranoko izay tsy nitsahatra nitombo mandra-pahatongan’ ny efitranoko hazava bebe kokoa noho ny amin’ ny mitataovovonana, ary niaraka tamin’ izay dia nisy olona niseho teo anilan’ ny fandriako ary nitsingevaheva izy ka tsy nandia tany ny tongony.
“Nanao akanjo lava, malalaka sy fotsy mangatsakatsaka fatratra izy. Ny hafotsiany dia mihoatra ny zavatra rehetra izay efa hitako hatrizao teto an-tany; sady tsy mino koa aho fa azo atao izay hahatonga ny zavatry ny tany ho lasa fotsy sy hamiratra fatratra toy izany. Nihanjaka ny tanany ary koa ny sandriny hatreo ambony kelin’ ny hatotanany; tsy misarona ihany koa ny tongony sy ny ranjony hatreo ambony kelin’ ny kitrokeliny. Tsy misarona ihany koa ny lohany sy ny tendany. Tsikaritro fa tsy nisy afa-tsy io akanjo lava io teny aminy, satria vaky anoloana izany ka hitako ny tratrany.
“Tsy ny akanjony ihany no fotsy izaitsizy, fa ny tenany rehetra dia mamirapiratra tsy hay tantaraina, ary toy ny tselatra marina tokoa ny tarehiny. Nazava fatratra tokoa ilay efitrano, kanefa mbola nanjelatra bebe kokoa noho izany ny faritra manodidina ny tenany. Raiki-tahotra aho raha vao nahita azy; nefa vetivety dia nisinda ny tahotra.
“Nantsoiny tamin’ ny anarako aho, ary nilazany fa iraka avy teo anatrehan’ Andriamanitra izy hankatỳ amiko ary i Môrônia no anarany; fa manana asa hampanaovina ahy Andriamanitra; ary mety ho tsara na ho ratsy eo anivon’ ny firenena, ny foko ary ny samy hafa fiteny rehetra ny anarako, na sady hindrahindraina no hotenenin-dratsy eo anivon’ ny olon-drehetra.
“Nolazainy fa misy boky iray milevina, voasoratra amin’ ny takela-bolamena izay mitahiry ny tantaran’ ny mponina fahiny teo amin’ ity kaontinanta ity sy ny loharano nipoirany. Nolazainy koa fa mirakitra ny fahafenoan’ ny Filazantsara maharitra mandrakizay izany, araka ny nanoloran’ ny Mpamonjy izany ireo mponina fahiny ireo;
“Ary misy koa vato roa, ao anaty tandro-bolafotsy—ary ireo vato ireo, mipetaka eo amin’ ny saron-tratra iray, no manome ny antsoina hoe: Orima sy Tomima—miara-milevina amin’ ireo takelaka; ary ny fananana sy ny fampiasana ireo vato ireo no maha-izy azy ny Mpahita tamin’ ny andro fahagola na fahiny; ary ny zava-nokinendrin’ Andriamanitra tamin’ ny nanomanany azy ireo dia ny fandikana ny boky.
“Nolazainy ahy indray fa rehefa azoko ireo takelaka izay efa noresahiny—satria tsy mbola tonga ny fotoana tokony hahazoako azy ireo—dia tsy tokony hasehoko olona ireo, na iza na iza, torak’ izany koa ny saron-tratra mbamin’ ny Orîma sy Tomîma, afa-tsy ireo izay handidiany ahy hampisehoana izany ihany; fa raha manao izany aho dia hofongorana. Raha mbola teo am-piresahana tamiko ny momba ireo takelaka izy dia nisy fahitana nisokatra tao an-tsaiko, ary dia azoko nojerena ny toerana nilevenan’ ireo takelaka, ary izany dia tena nazava sy nisongadina tokoa, hany ka fantatro indray ilay toerana nony efa notsidihiko.
“Taorian’ izany filazana izany dia nahita ny hazavana tao an’ efitrano nanomboka ho niangona nanodidina avy hatrany ny tenan’ ilay olona avy niresaka tamiko aho, ary tsy nitsahatra izany mandra-pahatongan’ ny efitrano ho tavela tanatin’ ny haizina indray, afa-tsy ny manodidina azy ihany, ary tampoka teo dia hitako ho toy ny misy lalantsara misokatra miakatra mivantana any an-danitra, ary dia nandeha niakatra izy mandra-pidifiny tanteraka, ka dia niverina toy ny teo aloha indray talohan’ ny nisehoan’ io hazavana avy tany an-danitra io ny efitrano.
“Nandrinandry teo aho lasa eritreritra noho iny tarehin-javatra tsy fahita iny, sady nitolagaga fatratra noho ny zavatra voalazan’ ilay iraka hafakely; fa mbola teo am-pisaintsainana teo aho no nahita tampoka fa nanomboka ho nihanazava indray ny efitranoko, ary poa toa izay raha lazaina dia efa teo anilan’ ny fandriako indray ilay iraky ny lanitra teo ihany.
“Nanomboka indray izy, ka ny zavatra teo ihany izay efa nolazainy tamin’ ny fitsidihany voalohany tsy misy fiovana na dia kely aza no nolazainy; rehefa izany, dia nampahafantariny ahy ny amin’ ny famaizana lehibe izay efa ho tonga eto an-tany miaraka amin’ ny fandripahana lehibe amin’ ny mosary, ny sabatra ary ny areti-mandringana; ary hihatra amin’ ny tany, amin’ ity taranaka ity, ireo famaizana mampangirifiry ireo. Rehefa avy nilaza ireo zavatra ireo izy dia niakatra toy ny efa nataony teo aloha indray.
“Tafalatsaka lalina tao an-tsaiko ireo teny ireo tamin’ izay fotoana izay, ka nandao ahy ny torimaso, ary dia nandrinandry teo aho, ankon’ ny fahagagana noho ny zavatra hitako sy reko. Akory anefa ny hagagako raha nahita io iraka io ihany indray aho teo anilan’ ny fandriako ary nandre azy nanantitrantitra na namerimberina indray tamiko ny zavatra tetsy aloha ihany; saingy nampiany fampitandremana ho ahy ka nilazany tamiko fa hanandrana ny haka fanahy ahy i Satàna (noho ny ankohonan-draiko miaina ao anatin’ ny fahantrana) hakako ireo takelaka ireo mba hampanan-karena ahy. Nandrara ahy izy tsy hanao izany, ka nilazany ny tsy hananako zavatra hafa banjinina, rehefa mahazo ireo takelaka ireo aho, afa-tsy ny voninahitr’ Andriamanitra sy ny tsy ho voataonan’ ny hevitra hafa, afa-tsy ny fanorenana ny fanjakany; raha tsy izany dia mety tsy ho azoko ireo.
“Taorian’ io fitsidihana fahatelo io, dia niakatra indray tany an-danitra toy ny teo aloha izy ary namela ahy hisaintsaina indray ny mahahafakely ity zavatra vao nodiaviko ity; fa saiky raha vantany vao tafakatra tany an-danitra ilay iraky ny lanitra rehefa nandao ahy fanintelony dia naneno ny akoholahy ary nahita aho fa efa mby akaiky ny maraina, izany hoe tsy maintsy ho nandany iny alina manontolo iny ny fihaonanay.
“Fotoana fohy taorian’ izay dia niarina avy teo am-pandriana aho, ary toy ny mahazatra dia namonjy ireo asa fanao isan’ andro-nefa raha nanandrana ny hiasa toy ny isan’ andro; aho dia nahita fa kely ny heriko, hany ka tsy nahefa na inona na inona. Tsikaritry ny raiko izay niara-niasa tamiko fa tsy dia tsaratsara aho ka dia nasainy nody. Dia niainga aho, ary ny fikasako dia ny hody any an-trano; kanefa raha iny handeha hihoatra ny fefin’ ilay tanimboly izay nisy anay iny aho, dia nandao ahy tanteraka ny heriko, ary tsy afa-nanoatra fa dia niankarapoka tamin’ ny tany ka tsy nahatsiaro tena mihitsy aho nandritra ny fotoana fohy.
“Ny zavatra tsaroako voalohany dia ny feo niresaka tamiko, niantso ahy tamin’ ny anarako. Niandrandra aho ka tazako indray ilay iraka teo ihany nijoro teo ambonin’ ny lohako sy voahodidina hazavana toy ny teo aloha. Tamin’ izay dia naveriny tamiko indray izay rehetra efa nambarany ahy ny alina iny, ary nandidy ahy izy hankany amin-draiko mba hilaza aminy ny fahitana sy ny didy efa azoko.
“Nankatò aho, ka niverina tany amin-draiko tany an-tsaha ary namerina taminy ny zava-drehetra. Avy tamin’ Andriamanitra izany hoy ny navaliny ahy, dia niteny ahy izy ny mba handehanako sy ny hanaovako araka ny nandidian’ ilay iraka. Nandao ny saha aho ka nankany amin’ ny toerana izay efa nolazain’ ilay iraka tamiko fa ilevenan’ ireo takelaka; ary satria nazava tsara ilay fahitana efa azoko momba izany, dia fantatro ilay toerana raha vantany vao tonga tany aho.
Misy vohitra iray be velarana izay avo indrindra amin’ ireo manodidina azy eo akaikin’ ny tanàna kelin’ i Manchester, fivondronan’ i Ontario, New York. Nilevina tao amin’ ny ilany andrefan’ io vohitra io, tsy dia lavitra ny tampony, ary tao ambanin’ ny vato iray ngezabe ireo takelaka napetraka tanatin’ ny vata vato iray. Matevina io vato io ary boribory ny tampony afovoany, ary manifinify ny atỳ amin’ ny sisiny, hany ka tazana eo ambonin’ ny tany ny ampahany afovoany ary rakotry ny tany ny sisiny rehetra manodidina.
“Naka fanoitra iray aho rehefa avy nalako ny tany, ka natsofoko teo amin’ ny sisiny ambanin’ ilay vato, ary dia notsindriako kely mba hanaingako azy. Nojereko ny tao anatiny ary dia hitako tao tokoa ny takelaka, ny Orima sy ny Tomima ary ny saron-tratra, araka ny voalazan’ ilay iraka. Ny vata izay nitoerany dia narafitra tamin’ ny vato natambatambatra tamina karazana simenitra. Nisy vato roa mitsivalana tao amin’ ny fanambanin’ ilay vata, ka nipetraka teo ambonin’ ireo vato ireo ny takelaka sy ireo zavatra hafa niaraka taminy.
“Nanandrana ny namoaka azy aho, kanefa noraran’ ilay iraka izay nilaza tamiko indray fa tsy mbola tonga ny fotoana hamoahana azy sady tsy mbola ho avy izany raha tsy efa afaka efa-taona manomboka amin’ io andro io; nolazainy ahy kosa anefa ny tokony hivereneko eo amin’ izany toerana izany rehefa afaka herintaona katroka, ary hihaona amiko eo izy, ary ny mbola hanohizako izany hatrany mandra-pahatongan’ ny fotoana hahazoako ireo takelaka.
“Noho izany dia nankeo aho isaky ny faran’ ny taona, araka ny efa nandidiany ahy, ary nahita ilay iraka teo hatrany, ary isaky ny nihaona izahay dia nandray torolalana sy fahalalana avy taminy aho momba izay handeha hataon’ ny Tompo sy ny fomba hoenti-mitondra ny fanjakany amin’ ny andro farany.
“Rehefa ela ny ela dia tonga ny fotoana ahazoako ny takelaka, ny Orima sy ny Tomima ary ny saron-tratra. Nankeo amin’ ilay toerana ilevenany aho ny faharoa amby roapolon’ ny volana Septambra fito amby roapolo sy valonjato sy arivo, toy ny efa mahazatra isaky ny mifarana ny taona iray, ka natolotr’ ilay iraky ny lanitra ahy izany niaraka tamin’ izao fepetra izao: zary tompon’ antoka aminy aho, fa raha avelako ho very izany noho ny tsirambina na vokatry ny tsy fitandremako, dia hofongorana aho; fa raha manao izay tratry ny heriko rehetra kosa aho hitahirizana izany, ambara-pihaviny, izy ilay iraka, haka izany, dia tokony ho voaro izany.
“Tsy ela dia fantatro ny antony nanomezana ahy fepetra hentitra toy izany mba ho azo antoka ny fitehirizana azy, ary ny nahatonga ilay iraka hiteny fa rehefa tontosako ny zavatra angatahina amiko, dia ho avy izy hitaky azy. Satria raha vantany vao fantatra fa azoko izany, dia nampiasaina ny fanerena mahery vaika indrindra mba hanesorana azy amiko. Nampiasaina izay tetika rehetra azo foronina hanantanterahina izany. Nihanangidy sy nihamafy kokoa noho ny teo aloha ny fanenjehana, ary nanao andry maso tsy tapaka izany ny ankamaroany mba hakany azy atỳ amiko raha azony atao. Nefa noho ny fahendren’ Andriamanitra dia tafajanona soa aman-tsara teo am-pelatanako izany mandra-pahavitako taminy izay nangatahina tamiko. Nony tonga haka izany ilay iraka, araka ny fandaminana, dia natolotro azy izany; ka efa eo ambany fitahiany izany mason’ andro androany faharoan’ ny volana Mey, valo amby telopolo sy valonjato sy arivo.”
Ho an’ ny rakitsoratra feno dia jereo ny Tantaran’ i Joseph Smith, ao amin’ ny Voahangy Lafo Vidy sy ao amin’ ny History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Tantaran’ ny Fiangonan’ i Jesoa Kristy ho an’ ny olomasin’ ny andro farany), boky 1, toko 1 ka hatramin’ ny faha 6.
Io rakitsoratra tranainy izay nofongarina toy izany avy tao anaty tany io, toy ny feon’ ny vahoaka iray miteny avy ao amin’ ny vovoka, ka nadika tamin’ ny fiteny ankehitriny noho ny fanomezam-pahasoavan’ Andriamanitra sy ny heriny, araka ny fanamarinan’ ny fanambaran’ Andriamanitra, dia navoaka voalohany teto an-tany tamin’ ny teny Anglisy, ny taona 1830 ho toy ny The Book of Mormon.